यस्तो छ चार महानगरपालिकामा कांग्रेस–एमालेको ‘पोजिसन’, को कति बलियो ? - Medianp.com
मिडिया एनपी ९प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, बैशाख २६, २०७४१३:१२0	काठमाडौं, २६ वैशाख । यतिखेर मुलुकका चार महानगरपालिकामा कुन दलका उम्मेदवारले मेयर जित्छन् भन्ने कौतूहलता देखिएको छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले ठूला महानगर विजयलाई आफ्नो दलको प्रतिष्ठा बनाएका छन् । त्यसमा पनि काठमाडौं, पोखरा र भरतपुरमा तीनै दल केन्द्रित देखिएका छन् ।
सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएका र दलहरूको इज्जतसँग गाँसिएका भनेका चारवटा महानगरपालिका नै हुन् । यी चारैवटामा प्रमुख दलहरू एक्लाएक्लै मैदानमा उत्रेका छैनन् । पोखरा र भरतपुरमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ भने काठमाडौं र ललितपुरमा राप्रपा र एमालेबीच तालमेल भएको छ । काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसले राजुराज जोशी र हरिप्रभा खड्गीलाई चुनावी मैदानमा पठाएको छ भने एमालेले राप्रपासँग तालमेल गरेको छ । उसले मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयरमा राजाराम श्रेष्ठलाई उठाएको छ ।
यस्तै, भरतपुरमा माओवादीकी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहाललाई कांग्रेसले समर्थन गरेको छ भने पोखरामा कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार रामजी कुँवरलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको छ । ललितपुरमा कांग्रेस एक्लै लडेको छ । तर, एमालेले भने राप्रपासँग तालमेल गरेको छ । ललितपुरमा कांग्रेसबाट चिरिबाबु महर्जन, एमालेबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र माओवादी केन्द्रबाट दिनेश महर्जन मेयरका उम्मेदवार बनेका छन् ।
यस्तो छ काठमाडौं महानगरको अवस्था
२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा महानगरपालिकाभित्रको मात्रै मतको मोटामोटी हिसाब गर्ने हो भने कांग्रेसको ९० हजार, एमालेको ६० हजार मा, माओवादीको २५ हजार र राप्रपाको १५ हजार हाराहारीमा देखिन्छ । एमाले र राप्रपाको मत जोड्दा ७५ हजार हाराहारीमा पुग्छ भने कांग्रेस एक्लैको ९० हजार मत छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै पर्ने यी दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको मत २८ हजार देखिन्छ भने एमाले, राप्रपा र माओवादीको आठ–आठ हजार देखिन्छ । यसैगरी, क्षेत्र नम्बर ४ को दुई तिहाइ एरिया महानगरपालिकाभित्रै पर्छ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले २२ हजार तीन सय ३६ मत प्राप्त गरेको थियो । एमालेले नौ हजार एक सय ३५ र माओवादीले ६ हजार चार सय ३२ मत प्राप्त गरेको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को आधा हिस्सा महानगरपालिकाभित्र पर्छ । यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले १५ हजार तीन सय ६४, एमालेले १४ हजार सात सय ३२ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ भने अहिले राप्रपाबाट उपमेयर पदमा उम्मेदवार बनेका राजाराम श्रेष्ठले चार हजार तीन सय ५९ भोट प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
क्षेत्र नम्बर ६ को आधा हिस्सा महानगरपालिकाभित्र पर्छ । यो क्षेत्रबाट गत चुनावमा नेपाली कांग्रेसले १४ हजार एक सय ५१, एमालेले १२ हजार आठ सय ४७ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । क्षेत्र नम्बर ७ को आधा हिस्सा महानगरपालिकाभित्र पर्छ । गत चुनावमा यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले १० हजार चार सय ८६, एमालेले १३ हजार दुई सय ८९ र माओवादीले सात हजार १५ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
पोखरा महानगरभित्रको मात्रै मत विश्लेषण गर्दा एमाले कांग्रेसभन्दा पाँच हजार मतले अघि रहेको गत निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ । कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल हुँदा एमालेको भन्दा करिब १० हजार मत बढी हुन आउँछ ।
संविधानसभाको गत निर्वाचनमा कास्कीका चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले ५४ हजार मत पाएको छ भने कांग्रेसले ५१ हजार मत पाएको छ । यसैगरी, माओवादी केन्द्रले २३ हजार मत पाएको छ । कास्कीका एउटा महानगर र चारवटा गाउँ गरी जम्मा पाँच पालिका रहेका छन् । महानगरभित्रको मात्रै मत विश्लेषण गर्दा एमाले कांग्रेसभन्दा पाँच हजार मतले अघि रहेको गत निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ ।
कस्तो छ भरतपुरको स्थिति ?
भरतपुरमा कांग्रेसको भन्दा एमालेको मत एक हजार बढी छ । क्षेत्र नम्बर ५ का ६ वटा गाविस पनि अहिले भरतपुरमा गाभिएको छ । क्षेत्र नम्बर ५ मा गत निर्वाचनमा कांग्रेसको कन्तबिजोग भएको थियो । यो क्षेत्रमा राप्रपाले १० हजार आठ सय, एमालेले आठ हजार चार सय, माओवादीले ६ हजार पाँच सय र कांग्रेसले चार हजार तीन सय भोट ल्याएको थियो । यो भोटको समेत हिसाब गर्दा भरतपुरमा कांग्रेसको मत एमालेको भन्दा पाँच हजार कम रहेको देखियो भने माओवादीको मत २२ हजारको हाराहारीमा रहेको देखियो ।
संसदीय निर्वाचनका दुईवटा क्षेत्र भरतपुर महानगरपालिकाभित्र पर्छन् । क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसका भीमबहादुर श्रेष्ठले एमालेका कृष्णभक्त पोखरलेको भन्दा करिब तीन हजार मत कम पाएका थिए । क्षेत्र नम्बर ४ मा भने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले एमालेकी पार्वती रावलभन्दा १० हजार मत बढी पाएका थिए । यो हिसाबले भरतपुरमा कांग्रेसको मत ३४ हजार र एमालेको मत २५ हजार देखियो । तर सुशील कोइरालाले छाडेपछि भएको उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण घिमिरेले एमालेकी पार्वती रावललाई दुई हजार मतअन्तरले मात्रै जिते । यो हिसाबले भरतपुरमा कांग्रेसको भन्दा एमालेको मत एक हजार बढी देखियो ।
ललितपुरमा यस्तो छ दलको अवस्था
संविधानसभाको गत निर्वाचनको परिणाम हेर्दा ललितपुरमा कांग्रेसको ५६ हजार, एमालेको २३ हजार र माओवादी केन्द्रको २१ हजार भोट देखिन्छ भने राप्रपाको चार हजार भोट देखिन्छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को झण्डै आधा हिस्सा र ३ को दुई तिहाइ हिस्सा पर्छ । संविधानसभाको गत निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसले ३२ हजार, एमालेले नौ हजार र माओवादीले १२ हजार भोट प्राप्त गरेका थिए । क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसले २४ हजार, एमालेले १२ हजार र माओवादीले ११ हजार भोट प्राप्त गरेका थिए ।
नेपाल र भारत सरकारको सम्झौताबाट बल्ब खरिद हुन्छ- ऊर्जामन्त्री शर्मापतिको उपचार खर्च जुटाउन टेम्पो चलाउँदै